अझै सञ्चालनमा आएन विष्णुमती पुल – Sulsule
सुलसुले २०७७ साउन २२ गते १४:३३ मा प्रकाशित
वि.सं. २०७१ असारमा पप्पु कन्स्ट्रक्सनसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो । पुलमा प्रयोग गरिएका कतिपय निर्माण सामग्री कम गुणस्तरको पाइएको सडक विभागले जनाएको छ । डिजाइनमा उल्लेख भएभन्दा फरक सामग्रीको प्रयोग गरेको पाइएपछि विभागले निर्माण कम्पनीलाई त्रुटि सच्याउन भनी वि.संं. २०७६ असारमा सूचना प्रकाशन गरेको थियो । उक्त सूचना प्रकाशन भएपछि पनि निर्माण व्यवसायीका तर्फबाट कुनै पहल नभएपछि ठेक्का तोडिएको विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माले बताए । उनले भने, “त्रुटि सच्याउन वास्ता नगरेपछि गत पुसमा ठेक्का तोडिएको हो ।”
पुल निर्माण गर्ने आयोजनाको कार्यालय खारेजी भएपछि सडक विभागमा हस्तान्तरण भएको थियो । परामर्शदाताले पुलमा रहेका त्रुटि औँल्याएपछि सच्याउन भनिए पनि त्यसमा निर्माण व्यवसायीले चासो नदेखाएको हो । पुल निरीक्षणका क्रममा त्रुटि पाइएकाले सवारी साधन सञ्चालन गर्न दिन नसकिएको शर्माको भनाइ छ । कानूनी प्रक्रियामा रहेकाले तत्काल पुल सञ्चालन हुन नसक्ने जनाइएको छ । उनले भने, “त्यहाँ रहेका समस्या हटाएर मात्रै सञ्चालन गर्न सकिनेछ ।”
विभागले सो पुलमा भेटिएका त्रुटि सच्याउन व्यवसायीलाई एक वर्ष पहिले भनेको विभागका पुल महाशाखा प्रमुख (उपमहानिर्देशक) दीपक भट्टराईले राससलाई बताए । निर्माण व्यवसायीले भने आफूले गरेको कामको भुक्तानी पाउनुपर्ने माग गरेको छ । सो पुलमा थप अध्ययन गरेर आवश्यक भएमा भत्काउनुपर्ने हुन सक्ने उनले बताए । बस्ती नजीक रहेको पुल भएकाले भत्काउन पनि सहज नभएको उनको भनाइ छ । उनले भने, “सवारी चाप हुने ठाउँ भएकाले त्यो पुल भत्काउँदा पनि क्षति हुन नदिने कुरालाई ध्यान दिइनुपर्छ ।”
पुलको बीचको खण्ड (मिडल स्पान) तीन सय मिटरमा समस्या रहेको पाइएको विभागले जनाएको छ । ठेक्का सम्झौता अन्त्य भएपछि निर्माण व्यवसायीले कुनै त्रुटि नभएको भनी बिल भुक्तानीका लागि जिकिर गरेको थियो । विभागको कानून महाशाखाअन्तर्गत मध्यस्तता प्रक्रिया चलिरहेको छ । पुलको स्वीकृत ड्रइङअनुसार पुलको लम्बाइ ६० मिटर हुनुपर्ने उल्लेख छ । तीन स्पानमध्ये बीचको ३० मिटर, दायाँ १० मिटर र बायाँ २० मिटर हुने उल्लेख छ । पुलको सब–स्ट्रक्चरसम्मको भुक्तानी भने भइसकेको विभागले जनाएको छ ।